CPD Ọzụzụ maka ndị ọkachamara | Ụgwọ Ọrụ Ụgwọ
Home gbasara Anyị Nkụzi CPD maka ndị ọkachamara
Thegwọ Ọrụ hasgwọ Akwadowo site na Collegelọ akwụkwọ Royal nke General Practitioners nke United Kingdom iji nyefee nzukọ ọmụmụ ụbọchị 1 na Ihe na-akpali agụụ mmekọahụ na ịkwa iko. Ọzụzụ anyị dabeere na-egosi na ọ gụnyere nyocha ọhụụ ọhụụ kachasị ọhụrụ n'ọhịa ịntanetị. Anyị na-elekwasị anya na mmetụta nke ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ na ịntanetị na ahụike, mmekọrịta, inweta na mmekọrịta n'ihi na iji ya zuru ebe niile taa.
Anyị enyela ndị nkụzi ụlọ akwụkwọ praịmarị na ụlọ akwụkwọ ọzụzụ ọzụzụ; ụmụ akwụkwọ mahadum; ndị nlekọta ahụ ike mmekọahụ; ndị dọkịta na ndị na-agwọ ọrịa uche; ndị nọọsụ; ndị ọkachamara n'ihe banyere mmekọahụ; ndị ọka iwu, ndị na-akwado na ndị ikpe; ndị ndú okpukpe; ndị ntorobịa; ndị na-elekọta mmadụ gụnyere ndị omekome na-elekọta mmadụ; ndị isi ụlọ mkpọrọ, ndị ọkachamara na ndị ọrụ obodo.
Rịọ ihe omuma
Anyị emechaala mmemme nkuzi ihu na ihu anyị ruo na njedebe nke mgbochi Covid-19. Biko kpọtụrụ anyị na info@rewardfoundation.org maka mkparịta ụka mbụ maka mkpa ọzụzụ gị. Anyị ga-ekwu okwu na ulo akwukwo iji mezuo ihe ị chọrọ. Anyị na-anabata ọrụ maka ọrụ n'ime United Kingdom na gafere. Ndị nkuzi anyị nwere ihe karịrị afọ 25 nwere ahụmahụ nke ọ bụla na-arụ ọrụ na gburugburu ebe obibi ọtụtụ agbụrụ, nke dị iche iche nke afọ, ọkwa agụmakwụkwọ na mba dị iche iche n'ụwa.
Ọmụmụ ihe anyị na-enyocha ụzọ oriri ịntanetị nwere ike isi gbanwee omume mmekọahụ, ụkpụrụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya, mmekọrịta mmadụ na ibe ya ma nwekwuo ikike ime mpụ. Ihe omumuihe a mechiri site na itule uzo ogwu na atumatu mgbochi. Ha na-enye ohere maka mkparịta ụka, nkuzi otu na ndị ọhụụ ọhụụ ka ndị sonyere nwee ike itinye ihe ọmụma a na omume ha.